Martin Strid SD:"Muslimku bina´aadan maaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Martin Strid ayaa ka tirsan xisbiga SD, qeeybtooda Dalarna. sawir: Lars Larsson/TT
Martin Strid SD:"Muslimku bina´aadan maaha
La daabacay måndag 27 november 2017 kl 14.30
Dadka aaminsan diinta islaamka bina´aadan maaha, sido kale waxeey u baahan yihiin in laga badbaadiyo diintaas. Sidaas ayuu Martin Strid oo xisbiga Sverigedemokraterna ka tirsan ka sheegay shirweeyne u xisbigani ku lahaa magaalada Norrköping sabtidii.
-Iyagu waxeey u jeedaan in arrinkani caadi u ahin xisbigooda, laakiin maaha markii ugu horreeysay uu xisbigani muujiyo fikiro cunsurnimo ah, ayuu sheegay Rashid Musa oo guddoomiye ka ah ururka dhalinyarada muslimiinta ee SUM loo soo gaabiyo.
Hadalka uu Martin Strid(SD) uu ka soo jeediyay masraxaas ayaa ka xanaajiyay dhowr urur oo muslim ah oo dacwad u gudbiyay boliiska.
-Haa waxaan ka mid nahay ururada ashkateeyay Martin Strid. Dacwadan ayaa ah isku dir qowmiyadeed, waxa afka swedhishka lagu yidhaahdo hets mot folkgrupp, ayuu sheegay Rashid Musa.
Isla xalay ayuu Martin Strid keligii codsaday in xisbiga laga saaro. Sidaas ayaa laga ogaaday warbixin soo gaadhay telefishinka la iska daawado ee TV4.
Dhanka kale ayey hogaanka sare ee xisbiga SD bilaabeen baadhitaan ku saabsan si xaalada cusub ee xisbigooda ka taagan loo xallin lahaa.
Richard Jomshof oo ah xooghayaha xisbiga SD ayaa sheegay in ay doonayaan in ay sida dhakhsada ugu badan xisbiga ka saaran Martin Strid. Jomshof ayaa u jeeda in cunsurnimada laga aqbalsaneeyn xisbigooda.
Qaar ka mid ah go´aanada lagu gaadhay shirweeynahan ayaa ahaa in shuuruudaha lagu adkeeyo qaxootiga waddanka ku cusub. Tusaale in ay ku khasbanyihiin in ay luuqada Swedhishka ah bartaan iyo in ay dhaqanka dalkan la qabsadaan hadii ay rabaan in sharci la siiyo.
Sido kale ayaa shirweeynahan lagu heshiiyay hindise ku saabsan in shuurudaha lagu atkeeyo dembiilayaasha islamarkaas na la xidho warfaafinta adeega guud ee "public service" loo yaqaano halka ay SVT, SR iyo UR ka tirsan yihiin.